एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी श्रीमती पदीय मर्यादा भूलेर ओलम्पिकमा म्यानेजर किन भइन् ? - Nepalese Times
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी श्रीमती पदीय मर्यादा भूलेर ओलम्पिकमा म्यानेजर किन भइन् ?
नेप्लिज संवाददाता ६ श्रावण २०७८, बुधबार १९:२४ (1 हप्ता अघि) ११३ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । वामदेव गौतमकी श्रीमती तुलासा थापा टोकियो ओलम्पिकमा म्यानेजर बनेर गएको विषय अहिले चर्चामा छ । वामदेवकी श्रीमती टोकियो ओलम्पिकमा जानै नहुने, म्यानेजर बन्नै नपाउने भने हैन ।
ओलम्पिकले सहभागी खेलाडीको व्यवस्थापनका लागि एक अफिसियल (म्यानेजर)को कोटा सम्बन्धित ओलम्पिक कमिटीलाई दिने गर्छ । तर एनओसीले आफ्ना पदाधिकारीलाई भिन्न खेलको म्यानेजर बनाएर विदेश घुमाउने गरेको छ ।
विदेश मोहकै कारण राष्ट्रिय खेल संघका अध्यक्ष म्यानेजरको हैसियतमा ओलम्पिक घुमेर फर्कने गरेका छन् । पदीय गरिमालाई भूलेर म्यानेजरको हैसियतको ओलम्पिक घुम्ने प्रचलन नेपालमा नयाँ हैन । तर यही गलत संस्कार नेपाली खेलकुदको परम्परा बनेको छ ।
‘सरकारी पैसामा विदेश घुम्न खेल पदाधिकारी जसरी लालायित देखिन्छन्, यो एनओसी र सम्बन्धित पदाधिकारीका लागि नैतिक प्रश्न हो । मान्छेभित्रको मान्छे मरेपछि के हुन्छ ? विगतदेखि देखिएको यहीनै हो ।’ लामा भन्छन् ।
‘देशमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा खेलकुदका पदाधिकारीको जवाफदेहीता र नैतिकताको प्रश्न हो । हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । यो घोर अनौतिक र भ्रष्टाचार हो ।’ उनी भन्छन्, ‘एनओसीकै पदाधिकारीले यसको विरोध गरेको देखिदैन । बरु साथ दिने गरेको छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्य अघि नबढ्ने हो भने समस्या यथावत रहनेछ ।’
‘सबैले अवसर पाउनुपर्छ । ओलम्पिक जानेले खेलाडीलाई हौसला भर्दिन पर्छ ।’ ओलम्पिकमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक खेल संघका अध्यक्षले खेलपाटीसंग भने, ‘यो एक प्रकारले ठिकै हो । चार वर्षमा एक पटक आउने ओलम्पिक सबैले अवसर आउन पर्छ । भोलि हाम्रो पनि अवसर आउछ । ओलम्पिकले गरेको निर्णयमा कुनै आपत्ति छैन ।’
राखेप सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल ‘सेभ द मिसन’ रहेको नेपाली टोलीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपाने टिपोटकार रुपमा सम्मिलित छन् । खेलपाटी डटकमबाट ।